Jaban ahama qaybo ka mid farsamo for steel ahama been abuur ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | Ouzhan
Feejignaanta qaybo bir ah
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka sameysan birta birta ah waa kaarboon, chromium, nikkel, iyo qaar ka mid ah waxyaabaha isku dhafan sida molybdenum, copper, iyo nitrogen. Nidaamka feedhka cas waa tiknoolajiyad farsameyn kulul oo casri ah oo lagu horumariyo iyada oo ku saleysan been abuur sax ah iyo xoqitaan kulul. Waxyaabaha farsamaysan ee qaybaha ayaa lagu hagaajiyaa iyadoo la beddelayo habka wax-u-qabadka. Nidaamka feedhka cas wuxuu kululaa birta maran sida habka foojignaanta saxda ah. Ku samaynta caaryada, marka laga reebo qaybaha waaweyn ee shaabadaysan ee casaanka ah, guud ahaan waa la sameeyaa hal mar, halka abuuritaanka saxda ah guud ahaan la sameeyo dhowr cadaadis.
Nidaamka feedhka cas wuxuu leeyahay ahmiyad ballaaran oo fog oo wax ku ool ah soo saarista mashiinnada, alaabada qalabka maalinlaha ah, difaaca, qaybaha aerospace iyo codsiyada kale. Tusaale ahaan, qaybo badan oo makaanik ah sida matoorada naaftada, cagafcagafyo, gawaadhi, gantaalo, iwm ayaa aad ugu haboon soo saarida habka feedhka cas. Waqtigan xaadirka ah, habka feedhka cas ayaa si ballaaran loogu isticmaalay soo saarista warshadaha qalabka maalinlaha ah, sida filtarka kala duwan, kala-goysyada tuubbada, lowska, iwm ee qalabka biibiile oo ka sameysan naxaas cas. Iyada oo leh faa'iidooyinkeeda tayada ee aan la qiyaasi karin, waxay ahayd Waxay beddeshay alaabooyinka lagu soo saaray dhimashadii ama tuurista hore. Ouzhan waxay bixisaa adeegyo habeysan oo ka sameysan birta birta ah ee feerka jabsada ee loogu talagalay macaamiisha qiimaha leh.
Faa'iidooyinka Shanghai Ouzhan ahama qaybo been abuurtay
- U isticmaal qalab caadi ah wax soo saarka, si sahal ah loo soo saaro wax soo saar, oo ku habboon ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe
- Waxsoosaar sareeya, oo ku habboon wax soo saar tiro badan
- Waxyaabaha farsamo ee qaybaha shaabbada cas waa wanaagsan yihiin
- In kor loo qaado cufnaanta biraha lana hagaajiyo iska caabinta daxalka qaybaha
- Ku habboon dhammaan noocyada midabaynta ama soo saarista birta madow
Qalabka farsamada birta ah ee birta ah ee birta ah
Isticmaalka Farsamooyinka kala duwan, kala-goysyada tuubbada, lowska, iwm ee qalabka dhuumaha Tonghonghong ayaa beddelay alaabooyinka lagu soo saaray dhimashadda ama tuurista iyaga oo leh faa'iidooyinkooda tayada aan la qiyaasi karin.
Hore: Ka samaynta qaybo bir bir ah
Xiga: OEM ahama qaybo farsamo been abuurtay